[Thursday, June 8th, 17] :: Dalka Qadar oo culeys siyaasadeed iyo mid dhaqaale uu soo wajahayo
Dooxa (RH) Dalka Qadar ee Khaliijka ku yaalla ayaa waxaa soo foodsaaray culeys siyaasadeed iyo mid dhaqaale kaddib markii ay xiriirka u jareyn waddamada Carabta sida Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar, kuwaasoo ku eedeyey in ay taageero siiso kooxaha argagixisada.
Waddamadan ayaa sidoo kale hawadooda ka xirtay dalka Qadar maadama ay lee yihiin xukuumada Dooxa waxa ay barbaarisaa kooxaha argagixisada.
Haddaba waxaa soo baxaya dedaalo la rabo in lagu xalliyo xiisaddan ka jirta waddamada Khaliijka, waxaana dowladda Kuwait ay sheegtay in ay arrintan damin doonto.
Amiirka Kuwait ayaa durba booqasho ku tagay magaalooyinka Riyadh, Abu Dabi iyo Dooxa isagoo la kulmay madaxda waddamadan wuxuuna kala hadlay sidii loo xallin xiisaddan ka jirta dhulka Khaliijka.
Dadka odorosa arrimahan waxa ay lee yihiin, ma fududa in wadamada Sacuudiga ay ka mid yihiin ay ka laabtaan go’aanka ay u takooreyn dowladda Qadar.
Wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa sheegay haddii la rabo in arrintan la damiyo waa in Qadar ay ka erisaa dalkeeda xubnaha ka tirsan Xamaas isla markaana ay joojiso taageerada ay siiso kooxaha Argagixisada oo Al Qaacida ay ka mid tahay sida uu hadalka u dhigay isla markaana ay joojiso taageerada warbaahinta hurinaya arrintaas sida Al-Jazeera.
Qadar waxaa ku sugan illaa 8,000 oo askari oo Mareykan ah waxaana ku yaalla saldhigga ugu weyn ee ciidamada cirka Mareykanka uu ku lee yahay bariga dhexe kaasoo ay duulaan diyaaradaha duqeeya saldhigyada ISIS.
Inta badan marinnada badda, cirka iyo dhulka ayaa la xiray iyadoo tallaabadaas daba socota xiisadda ka taagan waddamada Khaliijka, waxaan hoos u dhacay sarifka lacagta ee seyladaha Qadar, sidoo kale duulimaadyada ayey wareejisay waddamo ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Iiraan kaddib markii Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn ay hawadooda ka xirteen.
Muwaadiniinta reer Qadar ayaa ku xoomay seyladaha iyadoo ka cabsi qaba in cunto yari ay ku dhacdo, waxaana Qadar ay arrintaas si ay u daboosho kala hadashay waddamada Iiraan iyo Turkiga, sida ay baahisay wakaaladda wararka Reuters.
Qadar ayaa la sheegay in keydka cuntada ee hadda heysato uu dabbooli karo uun labo toddobaad kaliya.
Soomaaliya ayaa dhexdhexaad ka noqotay xiisaddan cusub, iyadoo ku baaqday in Jaamacadda Carabta ay arrintan xalliso.